(Kugcine ukubuyekezwa On: 10/07/2020)
Thanksgiving kuye kwaba iholide bendabuko kakhulu ehamba izungeze umkhaya njalo, igalikuni, futhi football. Nokho, labo among you bani ukujabulela abajikelezayo ongasebenzisa yokubaleka okusheshayo kufanele ucabangele kokuchitha kule sizini ngonyaka iholide kwesinye salezi Amadolobha Kuhle ukuba Vakashela i-Thanksgiving Europe.
Europe ngokuvamile wawugcwala kakhulu ezivakashini, kodwa umuntu Awukwazi ukusho okufanayo ngasekupheleni kuka-November. Yingakho kule ngxenye unyaka yisikhathi ephelele ukuvakashela imizi yasendulo futhi kabusha Thanksgiving amasiko ngokudla enkulu futhi emangalisa ukuwa imibala.
Awukwazi ukuya engalungile ngokuvakashela Bruges okwesikhathi Thanksgiving eYurophu. Ungakwazi nasezinganeni hop isitimela kule edolobheni ukwenza wonke isipiliyoni xaxa Amazing! and we are sure as soon as you complete your holiday, uzokwabelana lokhu 5 Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Ukuwavakashela for Thanksgiving eYurophu iposi blog.
Oslo is our most north pick for 5 Kuhle Amadolobha Okuthakazelisayo Ukuwavakashela for Thanksgiving eYurophu.
Labo kini ukuthi cabanga ukudla ukuba yingxenye ebalulekile Thanksgiving, uzoba ingxenye yakho fair eLondon. Ukudla yesehlakalo lapha umxhwele futhi zihluke njengayo emuva omunye emadolobheni amakhulu e-United. Kuzoba okuthile ukunambitheka wonke umuntu.
Umuzi ogwini esiluhlaza mesmerizingly echibini ezansi kwezintaba zase-Alps, ezwakala cishe imilingo. Lelo qiniso kuphela kufanele kube ngokwanele ukuze ukuchitha Thanksgiving yakho eYurophu khona lapho, Lugano is our most unique pick in Best Cities to Visit for Thanksgiving.
Noma ngabe unquma ukuya ekugcineni, kufanele ucabangele ehamba ngesitimela. Thanda sishilo izikhathi eziningi, ezinye zalezi zindawo ngeke akunike isipiliyoni ngobuqotho ngokuphelele ngaphandle kokuthi sibavakashele ngesitimela. ngaleyo ndlela kuphela ukwazi ubona umlingo wama-Europe ngempela. Xhumana Londoloza Isitimela to get your tickets as soon as possible because Thanksgiving is almost here!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cities-visit-thanksgiving-europe/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
europetravel London longtrainjourneys Thanksgiving Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela travelbelgium travelfrance travelnorway travelswitzerland